महिला सेक्सका लागि किन तयार हुन्छन् ? - Nayabulanda.com
महिला सेक्सका लागि किन तयार हुन्छन् ?
नयाँ बुलन्द ११ भाद्र २०७५, सोमबार ०३:०० 424 पटक हेरिएको
सेक्स मानव जीवनको अनिवार्य आवश्यक्ता हो । सेक्स मानिसको जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । धेरैले सोच्ने गर्दछन् पुरुष नै सेक्सका लागि तयार हुन्छन् । महिला सेक्सका लागि हिच्किचाउँछन् । हो, सेक्सका लागि पुरुष जति आक्रमक हुन्छन्, महिला त्यसको तुलनामा कम हुन्छन् । तर, महिला पुरुषको भन्दा कम उत्तेजित हुँदैनन् । उनीहरु उत्तेजित हुँदा पुरुष भन्दा कयौँ गुणा बढी हुन्छन् ।
पुरुष हरेक क्षण सेक्सका लागि तयार हुन्छन् । साना तिना कुराले पनि पुरुष तुरुन्त उत्तेजित हुन्छन् । जति छिटो उत्तेजित हुन्छन् त्यति नै छिटो पुरुष शिथिल हुने गर्दछन् । तर, महिला ढिलो उत्तेजित हुने ढिलै शिथिल हुने गर्दछन् । सेक्सका लागि महिला किन तयार हन्छन् ? टेक्सास यूनिभर्सिटीले एक अध्ययन गरेको थियो । महिला पुरुषसँग किन सेक्स गर्न तयार हुन्छन् ? भन्ने अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको निश्कर्षमा यस्तो आयो कि महिला बिवाह पछिको जीवन शान्तहोस भन्ने चाहनाले बिवाह अघिको सेक्सका लागि तयार भएका हुन् ।
यूनिभर्सिटीको साइकोलोजी विभागका प्रोफेसर सिंडी मेस्टन र डेविड बसले लेखेको वाय विमिन ह्याव सेक्स नामको पस्तकमा लगभग दुई सय जना महिलासँग सम्वाद गरिएको उल्लेख छ । कुराकानी भएका मध्ये ८४ प्रतिशतले जीवनमा शुखशान्ति भइरहोस भन्ने उदेश्यले सेक्स गर्ने गरेको उल्लेख छ । यसैगरी महिलाले टाउको दुखाइ कम गर्न पनि सेक्समा सहभागि हुने गर्दछन् ।
महिला सेक्समा सहभागि हुने अर्को कारण भनेको पुरुषप्रतिको दयाभावले पनि हो । आफुलाई मन परेको पुरुषले सेक्सका लागि हुरुक्क हुने भएकाले महिला उनीप्रति दया राख्दै सेक्समा सहभागि हुन्छिन् ।
महिलाले आफ्नो सेक्स क्षमता बिकासका लागि पनि पुरुषसँको सेक्समा सहभागि हुने गर्दछिन् । सुरु सुरुमा सेक्स गर्दा महिला त्यति अभ्यस्त हुँदैनन् । तर, जब पटक पटक सेक्समा सहभागि हुन्छन् । उनीहरुको सेक्सका तौर तरिकादेखि लामो समय सेक्स गर्ने क्षमताको बिकास हुन्छ । पुरुष मात्र होइन महिला पनि अनेक आशनबाट सेक्स गर्न रुचाउँछन् । नयाँ नयाँ तरिकाबाट पाटर्नर सँग सेक्स गर्न उनीहरुमा रुची हुन्छ ।